Ziguqula izinkomo zofuzo ukuze zikwazi ukumelana nokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Indlela enesifiso sokusiza izilwane nezitshalo ukuzivumelanisa nenkinga ekhulisa abantu shintsha i-DNA yakho ukubenza bamelane kakhudlwana nokushisa komhlaba. Yilokho kanye abacwaningi baseYunivesithi yaseFlorida abakwenzayo ngezinkomo.
Lezi zilwane ziwusizo olukhulu esintwini, ngakho-ke kuvela ukuthi kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi zizoqhubeka zikhona.
Ngendlela efanayo yokuthi kuhlobo olufanayo, kungaba lwesilwane noma imifino, kungaba nezinhlobo eziningi zezinhlobo, uma kwenzeka izinkomo kwenzeka into efanayo. Ngalesi sizathu, iqembu labaphenyi, kufaka phakathi uSolwazi Raluca Mateescu ovela eMnyangweni Wezesayensi Yezilwane we-UF / IFAS we-University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences, bayaphenya inkomo ye-brangus, okuyinto ebekezelela ukushisa. Lesi yisiphambano phakathi kwezinhlobo ze-Angus neBrahman.
Ukuze benze kanjalo, bathole isibonelelo seminyaka emithathu sikahulumeni ngo- $ 733. Ngayo, bazokwazi ukulandelela izingxenye ze-DNA zezinhlobo ezimbili, ezizobasiza ukuthi bazi iziphi izifunda ze-DNA ezibalulekile ekulawuleni izinga lokushisa komzimba wesilwane, ngokusho kukaMateescu.
Cishe ama-40% wezinkomo zenyama emhlabeni zitholakala e-United States. Ukuze kutholakale izilwane ezijwayele kangcono izimo zokuphila ezifudumele futhi zibe nenyama esezingeni elingcono, abacwaningi bafuna ukuphenya ngokuhamba kwesikhathi besebenzisa amathuluzi we-genomic ukuthi bangawenza kanjani abe nokubekezelela okukhulu ukucindezela kokushisa.
Akungabazeki ukuthi lolu uphenyo, ngamagama aseMateescu, "olunikeza indlela entsha enamandla yokubhekana nezinselelo zokuguquguquka kwesimo sezulu nokuthuthukisa imfuyo ekhiqizayo ekhaliphile." Kodwa kuthiwani ngawe, ucabangani ngokuphathwa kwezakhi zofuzo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ziguqula izinkomo zofuzo ukuze zikwazi ukumelana nokushisa komhlaba